I-Herkulesstaude nayo yaziwa ngegama elithi Riesenbärenklau noma iBärenkralle. I-Giant Bear Claw ivela emkhayeni wesitshalo we-umbels futhi ivela eCaucasus. Ngokokuqala ngqa, isitshalo se-1985 savela eYurophu.
I-Hercules shrub ingafinyelela usayizi wamamitha amathathu. Isiqu esivele sitholakala emnyama futhi sinezinwele ezinhle ezitholakala kuso sonke isitshalo.
I-Giant Bear Claw - MabelAmber / Pixabay
Ububanzi be-stalk ngamamentimitha amabili kuya kwanguyishumi, kuye ngobukhulu besitshalo. Amaqabunga aluhlaza we-giant hogweed ngokuyinhloko anebude bemitha eyodwa. Izimbali ezincane kakhulu ziba nobubanzi be-30-50 centimeters. I-Hercules shrub ingaqukatha izimbali ezilodwa ze-80.000.
Isikhathi sokuqhakaza sisukela ngoJuni kuze kube sekupheleni kukaJulayi. Izimbali ezimhlophe zinamaphesenti angu-2 ububanzi futhi zikhula ngokubanzi phezulu. Njengoba amaqabunga amhlophe omuncu abukeka afana kakhulu nezinyawo zezilwane zebheyi, lesi sitshalo sabizwa ngegama elithi Bärenklau ngalesi sizathu.
Ngemuva kwezinhlamvu zezithelo zezithelo, lesi sitshalo sifa. Uma lesi sitshalo singavuthi, singasinda kalula iminyaka eminingana. Imbewu ye-Herkulesstaude iyakhula iminyaka eminingi.
I-Hercules shrub ayikhulumi kumhlabathi we-asidi. Uma kungenjalo, uyahluleka kakhulu futhi udinga ilanga elincane ukuze aphile iminyaka eminingi.
I-hogwe enkulu ye-giant iqukethe okuthiwa ama-furocoumarins, okubangela ukusabela kwesikhumba ngemuva kokuxhumana kwesikhumba.
Ngisho nokuxhumana okuncane namaqabunga kungase kube ngokwanele ukuze kulungiswe isikhumba kakhulu. Ezimweni ezimbi nakakhulu, ngisho nama-blister angase akheke esikhumbeni. Lezi zibuhlungu kakhulu futhi zivutha kalula futhi zingabangela ukushisa kokuqala nesesibili.
Ngaphandle kokucasuka kwesikhumba, futhi izinyembezi ezikhalayo nazo zingabangela umkhuhlane, izinkinga zomjikelezo kanye nokujuluka. Lezi zindlela zingathatha amasonto.
Uma uhlangana nesitshalo, kufanele ugeze ngokugcwele izikhumba ezihambisana namanzi nesepha. Uma kwenzeka ukucasula isikhumba, i-dermatologist kufanele ibonane ngokushesha ukuze kusetshenziswe ukwelashwa okufanele.
Ngokungafani neGiant Bear Claw, i-Meadow Hogweed ivela eYurophu. Ngokuyinhloko uthola i-Giant Bear Claw emabhange nasemigodini futhi ikhule ngokukhethekile emhlabathini onomanzi, ovulekile. Ngokubukeka, izitshalo zombili zibukeka zifana kakhulu.
Uma lesi sitshalo sisencane, asikho ingozi yokuyibulala. Ngokuvamile amaqabunga avame ukusetshenziswa njengezinkomo zokudla. Noma kunjalo, izilwane akufanele zithole okuningi, ngoba zingabangela ukucasula isikhumba. Ngokuya ngobukhulu besitshalo esincane, isiqu singadliwa esiluhlaza, noma siphekwe ukuba sihlanganise.